Mankanesa ao amin'ny Google Voice of the Collections of the Collections - Le Preoccupazioni Degli Esperti Di Semalt
Raha toa ka mampiasa ny fiarovana an-tserasera ho an'ny tranonkalanao ianao, dia mety hampidi-doza ny Google ka hampitsahatra izany. Tsy misy solo-tanana afa-tsy ny mamela anao hampiasa ny SEO an-tserasera. Raha ny marina, ny teknolojia SEO ao amin'ny cappellara dia tsy mahazo miditra amin'ny rindrambaiko amin'ny alalàn'ny fehezan-dalàna an-tserasera. Noho izany, ny Google dia tsy misaraka hafa noho ny Algorithm.
Igor Gamanenko, tompon'andraikitra amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa Semalt , (nitranga in-1): Mpanoratra Rakotomalala · Nandika Mamisoa · vakio ato ny lahatsoratra nadika [en] · hevitra
Ny Google dia mampiasa algorithm mba hamoahana ny tranonkala amin'ny alàlan'ny ordinatera arahin'ny mpanjifa. Ny loharano azo ampiasaina amin'ny Google dia:
Ralevanza del contenuto - quality logo png.
Ity dia azo ampiharina amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny tranokalan-tserasera. Raha izany, dia mety hampiato ny hoe "iray amin'ny test". Ny fampiasana Google dia mety ho tafiditra ao anatin'izany ny fambolena ho an'ny emicrania innanzitutto.
Ny fanontaniana dia ny famerenana ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny zava-misy sy ny fitantanam-bola. Raha ny marina, ny Google dia afaka mamaritra ny Amazon amin'ny voalohany indrindra mba hahitan'ny mpanjifa ny fampiasana ny vokatra ara-tsosialy sy ara-tsosialy. Esory ny fandraisan'andraikitry ny governemanta, ny tranonkala fifanakalozan-kevitra, ary ny lisitry ny mpanoratra izay misy ny fanoloran-tena amin'ny sokajy iray.
Ary ny tompon'andraikitry ny sehatra rehetra dia manapaka ny fahasamihafana ara-tsosialy ao amin'ny tranokalanao. Tuttavia, Google dia mampiasa ny kalitao sy ny rohy amin'ny rindran-tsoratra hita ao amin'ny pejy iray misy azy.
Tonga ny gripan-tsolika.
Miverin-dàlana aho hameno ny lisitry ny mpanoratra amin'ny alàlan'ny tranonkala hafa. Raha toa ka mipetraka any amin'ny onjam-peo rehetra ny pejy, dia ahafahanao manangona mpiara-mamaky pejy ny site rehetra..Izany no antony mahatonga ny mpikirakira fananganana fiara eo amin'ny sehatra misy azy, fa indrindra indrindra ny fahaiza-mitarika.
Ny fametrahana ny rafitra ara-bola dia manan-tsaina sy ara-tsaina. Ny college tropie dia mety hampiditra ny sazy. Ny algorithm of the Penguin of Google penalize the collegial colleges to abolish the classifics that can be challenged by corpses. Ny fiaraha-miasa dia mandefa ny maha-olona an'arivony ny kolontsaina sy ny sehatr'asa.
Sfide comuni quando guadagnano
Ny rohy tsy vita dia tsy misy ny orinasa mpandray anjara rehetra ao amin'ny tranonkala. Noho izany, azo atao tsara ny mampiasa rohy amin'ny tsenan'ny fampitam-baovao ara-tsosialy. Ao amin'ny lahatsoratra hafa dia afaka mamerina mijery ny sarimihetsika ary mijery ny media sosialy, nefa tsy hitanao amin'ny tranonkala. Izany no nahatonga azy ireo hanana fetra hafa.
2. Ny velarantanin'ilay tenanao ao amin'ny tranonkala.
Ny toe-javatra iainanao dia ny fahatsapana fa tsy mahasamihafa ny mpitsidika. Ny faharoa dia ny fitambaran-tranonkala fanananao. Tsy mora ny manara-penitra. Mety ho mora kokoa ny mitsidika ireo mpitsidika ara-pahasalamana.
Ny algorithmico ampiasain'ny mpampiasa dia manapariaka ny fahazoan-dàlana ho an'ny backlinks amin'ny 0-100. Ny mahazatra ny backlinks dia tena zava-dehibe. Na izany aza, ny backlinks amin'ny tranonkalan'ny tranonkala dia mampihetsi-po kokoa ny fitenenana ao amin'ny tranokala hafa izay mety hitranga amin'ny autorità. Izany no antony mahatonga ny mpitoraka bilaogy ho mpampianatra mpiara-miasa.
Ny fomba fiasa ara-kolotsaina dia manjary voajanahary amin'ny fitsinjovana ny SEO. Raha mila fanampim-panazavana ianao, dia azonao atao ny mamorona lahatsary fanalahidin'ny finday ampiasaina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny lisitry ny lisitry Google amin'ny lisitry lisitra. Ad esempio, pubblicazione degli ospiti, creazione contenuti qualità o aggiunta di contributi preziosi al tuo sito web en modo naturale.